संसदको गतिरोध | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / सम्पादकीय / संसदको गतिरोध
Posted by: युगबोध in सम्पादकीय January 24, 2019	0 86 Views
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीचको विवादका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक लगातार अवरुद्ध हुँदै आएको छ। जी.पी. कोइराला श् वास प्रस्श्वास केन्द्र तनहुँ र सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल बाँकेलाई केन्द्र सरकार मातहत राख्नुपर्ने माग राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लगातार सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ। यसैगरी सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेको चिकित्सा राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक २०७५ प्रति पनि कांग्रेसको असहमति देखिएको छ। मंगलवारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सो विधेयक प्रस्तुत गर्न थाल्दा शिक्षामन्त्रीलाई घेराबन्दी गरेर कांग्रेस सांसदहरुले रोकेका थिए। यसरी संसदभित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको द्वन्द्व देखिएको छ। संसदीय अभ्यासका क्रममा यसलाई सामान्यरुपमा लिनेहरु पनि होलान् । तर यो स्थितिले निरन्तरता पाइराख्नु उचित हुँदैन।
संसदीय प्रणालीमा सत्तापक्षको बहुमत हुन्छ भने प्रतिपक्ष अल्पमतमा हुन्छ। तर पनि यो प्रणाली सहमतिमै चल्न सक्यो भने यसको प्रभावकारिता अझ बढ्छ। दुई तिहाईको बहुमतप्राप्त सरकार भए पनि प्रतिपक्षलाई सँगसँगै लिएर जाने कुरा उसको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। संसद भनेको कुटपिट गर्ने, कुर्सीले हान्ने, कुर्सी भाँच्ने वा मनलागी गर्ने थलो अवश्य होइन । तर पनि विभिन्न मुलुकहरुमा यस्ता क्रियाकलापहरु भइरहेका हुन्छन्। नेपाल पनि त्यसको अपवाद छैन। तर खराब प्रवृत्तिलाई भित्रिन नदिने कुरामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैले सचेतना अपनाउन सक्नुपर्छ। संसदलाई कामकाजी ढंगको, बौद्धिक अभ्यासको थलो बनाउन सकियो भने यसको गरिमा उँचो हुन्छ। यसमा सबै राजनीतिक दल र सांसदहरुले गम्भीरता देखाउन सक्नुपर्ने हो। तर हाम्रो यहाँ ठूला वरिष्ठ नेताहरु बाहिर–बाहिर व्यस्त रहने, संसदभित्र प्रवेश नगर्ने प्रवृत्ति छ।
हाम्रो विचारमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले नीतिगत सैद्धान्तिक विषयमा विवाद वा बहस गरेर जनताको हृदयमा घुस्ने अभ्यास नै गर्न सकेका छैनन्। नेपालमा अहिले धेरैभन्दा धेरै बेथिति भएको क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य नै पर्दछन्। शिक्षा र स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ भन्ने माग जनस्तरबाट व्यापकरुपमा उठिरहेको छ। के यसका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष तयार छन् ? त्यसैले मूल विषयमा आफूलाई केन्द्रित गर्न नसकेर सानातिना विषयमा अल्झनु राम्रो होइन। अहिले त शिक्षा र स्वास्थ्यका माफियाहरु सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको वरिपरि घुमिरहेका छन्। यो क्षेत्रमा बढी लगानी गर्ने पनि यिनीहरु नै छन्। यो स्थिति अन्त्य गर्ने हो भने निश्चित समयसीमा दिएर शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार गर्न रोक लगाउनुपर्छ। संविधानले अंगीकार गरेको समाजवादी राज्यको मर्म र भावनाअनुरुप चल्ने हो भने यो सम्भव छ, गर्ने आँट भने अवश्य चाहिन्छ।
जनताको चेतनास्तर धेरै माथि उठिसकेकोले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको द्वन्द्व कृत्रिमढंगको हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा दुबै पक्ष सचेत हुनुपर्छ। यो नीतिगत र इसुमा आधारित हुनु जरुरी छ। मूल कुरो स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको जथाभावी र बदमासी रोक्ने हो। यसका लागि राज्यले जिम्मेवारी लिन तयार हुनुपर्छ। आजको प्रतिपक्ष भोलिको सत्तापक्ष भएकोले प्रतिपक्ष पनि राज्यको अंगभित्रै पर्छ। ऊ पनि जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन। हाम्रो भनाइ यत्तिमात्र हो कि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै मूल विषयमा प्रवेश गर्न सक्नुपर्छ र झिनामसिना विवादमा अल्झन हुँदैन। सा“च्चै नेपाली समाजलाई बदल्ने हो भने कुरा र भाषणले मात्रै सम्भव छैन। अब विकृति, बेथिति, कुसंस्कार र गलत प्रवृत्तिमाथि प्रहार गर्न सक्नुपर्छ। जबसम्म त्यसो गर्न सकिन्न तबसम्म समाज बदल्न गाह्रो पर्नेछ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइराला नेपाली कांगे्रसको मात्र नेता नभएर लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका व्यक्तित्व भएकोले उहाँहरुको नाममा राखिएका अस्पतालहरुलाई केन्द्र सरकारको मातहत राख्ने मागलाई विवादको विषय बनाउनु उचित हुँदैन। यो विषयलाई सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले सहजताका साथ समाधान गर्दै सहमतिमा पुग्नुपर्छ। बाँकी विषयहरुलाई पनि छलफलको माध्यमबाट हल गर्दै संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्छ। देश र जनताको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने हो भने कुनै पनि विषयमा विवाद नहुनुपर्ने हो। तर विगतलाई खोतल्ने हो भने दुबै पक्ष यसमा चुक्दै आएका छन्। अहिले पनि त्यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ। साँच्चै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने हो भने विगतका गलत प्रवृत्ति त्यागेर नयाँढंगले अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ।
Previous: विवेक–बुद्धि पलाए नेपाल नमूना बन्नसक्छ
Next: कृषि प्रविधि प्रदर्शनी